Maskaxda Maskaxda: Waxyaabaha loo Kordhiyo Wax Soo Saarka | Laga soo bilaabo Linux
Ka dib 2 qoraal hore ku saabsan Barnaamijka maskaxda, kaas oo ku wajahan hagaajin wax soo saar isticmaalayaasha kombuyuutarkooda, waxaan ku dhamaan doonnaa tan saddexaad daabacaadda in sifiican loogu faafiyo kartideeda iyadoo la adeegsanayo plugins ugu fiican rakibay oo laga heli karo.
Waxaa mudan in la xasuusto oo la adkeeyo in kastoo Barnaamijka maskaxda xirka 2 sano oo aan cusbooneysiin, waxay u oggolaaneysaa kuwa leh aqoonta lagama maarmaanka ah, abuuro waxyaabo kuu gaar ah lana wadaagaan bulshada si ay usii wadaan kordhinta awooda arjiga.
Maanta, sida ku xusan qaybta ku saabsan plugins oo ka mid ah Websaydhka rasmiga ah ee Cerebro ee GitHub Waqtigaan waxaa jira waxyaabo kuwan soo socda oo gaar ah iyo adeegsi guud:
1 Qalabka isticmaalka gaarka ah
1.1 Gaar u ah Nidaamka Howlgalka ee MacOS
1.2 Gaar u ah Windows Operating System
1.3 Gaar u ah Nidaamka Howlgalka Linux
2 Ujeeddooyin Guud Ujeeddo
3 Kaabista Maskaxda
3.1 Ugu weyn
3.2 Ku daray
Qalabka isticmaalka gaarka ah
Gaar u ah Nidaamka Howlgalka ee MacOS
xiriirada maskaxda-osx: Waxaa loo adeegsaday si loogu oggolaado maareynta macluumaadka ku saabsan arjiga xiriirka OS
maskaxda-osx-qeex: Waxaa loo adeegsaday in loo oggolaado maareynta macluumaadka ku saabsan codsiga qaamuuska OS
maskax-osx-tuurid: Waxaa loo adeegsaday in lagu maareeyo soo saaris dhakhso badan oo ka mid ah OS-ka la saaray
nidaamka-osx-system: Waxaa loo adeegsaday in lagu maareeyo otomatiga astaamaha qaar ee nidaamka OS
maskaxda-iterm: Waxaa loo adeegsaday in lagu gaaro fulinta amar kasta oo Shell ah oo laga helo qadka raadinta, sida haddii ay ahaan lahayd, laga soo bilaabo arjiga terminalka (konsol) ee OS
Gaar u ah Windows Operating System
maskax-waa-wax walba-plugin: Waxaa loo adeegsaday in laguu oggolaado raadinta xogta iyo macluumaadka adoo adeegsanaya codsi kasta oo ka socda Voidtools. Wax walbaa waa adeeg raadin desktop ah oo loogu talagalay Windows kaas oo si dhakhso leh u heli kara faylasha iyo faylalka magac ahaan.
nidaamka-maskaxda-daaqadaha: Waxaa loo adeegsaday in lagu maareeyo otomatiga astaamaha qaar ee nidaamka OS
maskaxda-daaqadaha-qolof: Waxaa loo adeegsaday in lagu gaaro fulinta amar kasta oo Shell ah oo ka yimid khadka raadinta, sida haddii ay ahaan laheyd, arjiga terminal (console) ee OS
Gaar u ah Nidaamka Howlgalka Linux
nidaamka-maskaxda-nidaamka: Waxaa loo adeegsaday in lagu maareeyo otomatiga astaamaha qaar ee nidaamka OS
maskax-daaqad-maareeye: Waxaa loo isticmaali jiray in lagu taxo daaqadaha codsiga ee furan oo la dhigo aagga hore ama la xiro.
Ujeeddooyin Guud Ujeeddo
Kuwani waa magacyada qalabka rasmiga ah ee loogu talagalay guud ahaan ama isticmaalka guud, taasi waa, waxaa loo isticmaali karaa OS kasta oo lagu rakibay:
Sidaad arki karto, waxaa jira kuwo badan oo dhammaantood leh waxqabadyo kala duwan. Si kastaba ha noqotee, kuwa isticmaala ee aan iyaga siin Barnaamijka maskaxda iyaga ku saabsan GNU / Linux Distros ama iyagu ma jecla, waxaa jira waxyaabo kale oo wanaagsan oo fudud oo fudud sida copper y Albert.
Sida hada, waxaan isticmaalaa Barnaamijka maskaxda aniga igu saabsan GNU / Linux Distro, Dhibaatooyin la'aan, sidaa darteed, waxaan kugula talinayaa inaad adeegsato marka laga reebo 2-da nooc ee gaarka ah ee "Linux"nidaamka-maskaxda-nidaamka y maskax-daaqad-maareeye), 10-ka kudar ee hoos ku xusan adeegsiga soosocda, kuwaas oo qaarkood horeyba loogu rakibay qaab ahaan:
Google: Si aad uga baarto shabakada biraawsarka oo qaab ahaan loo qaabeeyey.
Faylasha Nav: Si aad u hesho horudhac faylasha la soo bandhigay markii la daalacanayo dariiqyada OS
Bedelka: Si loo sameeyo beddelidda cabbirka cutub iyo lacag (lacag) iyo hawlgallo xisaabeed fudud.
Furan Webka: Si aad u eegto cinwaan URL ah. Waxay kuxirantahay shabakada la sahamiyay, astaamaha (favicon / logo) ayaa la keeni karaa ama maya.
Raadinta Goobta: Si aad uga baarto baaritaanka nidaamka faylka.
Translate: Si aad u fuliso turjumaadaha luqadaha kala duwan iyo Ingiriisiga barta baaritaanka.
Shell: In lagu fuliyo amarrada dariiqyadooda dhabta ah ee bilaabaya codsiyada garaafyada ama amarada terminalka, labadaba mid fudud iyo mid adag, taas oo ka dhigeysa mid ku habboon tijaabinta amarrada Shell Scripting ee ka socda Desktop-ka.
IP: Si aad u eegto cinwaanada shabakadeena lagu qoondeeyay isku xirnaanta shabakada barta baaritaanka.
Win: In la soo bandhigo daaqad gaar ah oo ka mid ah barnaamijyada hadda socda.
Cryptocurrency: Si aad u aragto qiimaha iyo u dhigma badan oo ka mid ah lacagaha hadda loo adeegsado nidaamka 'Blockchain Ecosystem'.
Marka la soo koobo, sida aad u jeeddo, waxaa jira waxyaabo badan oo faa'iido leh waa la isticmaali karaa, laakiin qaarkood ma shaqeyn karo ku qanacsan on a Deegaanka Desktop ama GNU / Linux Distro ayaa qeexaya. Si kastaba ha noqotee, waxaa jira qalab la yiraahdo «Taliyaha Sameeya"taas oo awood u leh abuuro shaqeyn gaar ah, sida a amarka caadiga ah qabtaan hawl cayiman, taas oo siinaysa dalab badan oo dabacsanaan ah.
Waxaan rajeyneynaa kan seddexaad iyo kan ugu dambeeya "waxtar yar post" ku saabsan «Cerebro», Xaqiiji inay shaki la’aan tahay mid xiiso leh oo shaqeyneysa ilo furan iyo iskutallaab codsi, aad u faa'iido badan si loo hagaajiyo our wax soo saar miisaska kombiyuutarradeena; oo sidaas daraaddeed, wax badan noqo dan iyo utility, Dhammaan «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» iyo wax ku biirinta baahinta ee nidaamka deegaanka ee cajiibka ah, weyn iyo sii kordhaya ee «GNU/Linux».
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Aplicaciones » Maskaxda Maskaxda: Plugins si kor loogu qaado wax soo saarka
SpaceX: cirbixiyeyaasha u qaad meel bannaan adoo adeegsanaya Linux
PeerTube 2.2 wuxuu la yimaadaa horumar si loo soo dhoofiyo feylasha codka, fiidiyoowga fiidiyowga, istcimaalka isticmaalaha iyo waxyaabo kale oo badan